Monthly Bonus For August 2020 ? Gold ? Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 2,604 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Ei Ei Thae Po Khin Saw (FB-000014) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 2,600 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Nyein Thu Paing (FB-000146) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Gold Agent တို့ August လအတွင်း Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 2,604 ကျော်နှင့် အတုံး 2,600 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Gold အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 2,604 ကျော်နှင့် အတုံး 2,600 ကျော်ရောင်းချသော Agent အတွက် ?ငွေသား (7) သိန်း (8) သောင်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus For July 2020 ? Gold ? Beaute Cafe အထုပ် 1,000 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Thet Thet Aung (FB-000006) Zu Mon Hlaing (FB-000152) Aye Aye Mar (FB-001065) Yu May Aung (FB000048) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Gold Agent တို့ July လအတွင်း Beaute Cafe အထုပ် 1,000 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Gold Agent အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ?ငွေသား (10) သိန်း (5) သောင်း ကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Ketchup Matte Liquid Lipstick 1500 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent တွေကတော့ Lae Shwe Yee (FB000020) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Lae Shwe Yee !!! June လအတွင်း Ketchup Matte Liquid Lipstick 1500 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Gold Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (7) သိန်း (6) သောင်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Ketchup Matte Liquid Lipstick 1000 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent တွေကတော့ Thet Thet Aung (FB000006) Nilar Thin (FB000031) Nyein Thu Paing (FB000145) Hnin Thiri Kyaw (FB000153) Kay Thi Myint Kyu (FB000782) Ei Ei Phyu (FB000080) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Gold Agent တို့ !!! June လအတွင်း Ketchup Matte Liquid Lipstick 1000 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Gold Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (5) သိန်း (3) သောင်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Ketchup Matte Liquid Lipstick 1200 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Nandar Lin (FB000683) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Nandar Lin !!! June လအတွင်း Ketchup Matte Liquid Lipstick 1200 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Gold Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (6) သိန်း (1) သောင်း ကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Ketchup Matte Liquid Lipstick 1600 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Ma Thaint (FB000149) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Ma Thaint !!! June လအတွင်း Ketchup Matte Liquid Lipstick 1600 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Gold Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (7) သိန်း (9) သောင်း (5) ထောင်ကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို ဆပ်ပြာတုံး 3600 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကေတာ့ Nwet Mar Win (FB000441) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Nwet Mar Win !!! June လအတွင်း ဆပ်ပြာတုံး 3600 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Gold Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (12) သိန်း (5) သောင်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။